Nezinye Izindaba Ukuthengiswa Kwehlobo 2018: Ongakuthenga - Isitayela
Izinto ezingama-24 zokuthenga kusuka nakwezinye izindaba 'Ukuthengiswa Kwehlobo kwe-2018
Kube ukukhuphuka kancane, kepha ihlobo lilapha, okusho ukuthi-masibe ngokoqobo— ukuthengisa okukhulu . Ngenhlanhla, ithani lezitolo zakho ozithandayo nesayithi linikezela ngamadili, kepha sigxile kulokho ekuthengisweni kwehlobo nezinye izindaba. (Isikhumbuzi: Umthengisi othandekayo waseSweden wafika e-US naku-inthanethi eminyakeni embalwa eyedlule futhi kwenzeka futhi ukuthi ungudadewabo onentengo ephansi ka-H & M.) Njengamanje, ukuthengiswa kwehlobo kusemthethweni, futhi kugcwele izingubo zezimbali, iziketi ze-midi, ama-blouses athakazelisayo , izimbadada ze-suede, izikhwama zesikhumba, nobucwebe obukhazimulayo kuze kufike emaphesentini angama-70, ngakho-ke ukuqoqa izinto ezimbalwa ezintsha zomsebenzi, izimpelasonto, iholide, imishado, nokunye okuhle kakhulu okunye ukuphuma ehlobo kungumsebenzi wokuma kanye. Lapha, sikhethe izinto ezingama-24 esizothenga manje, noma kunokuningi ongakhetha kukho.
OKUNINGI: Ukuthengiswa kweSikhumbuzo seNordstrom 2018: Ukuthengwa Kwemfashini Okuhamba Phambili Okuhamba Phambili
Okuphezulu Okumucu, intengo yokuthengisa engu- $ 39 $ 27, ku- Nezinye Izindaba
Yenziwe ngokotini ojiyile, othambile, le top ephezulu enemigqa ifaka intamo yesikebhe nomumo oxegayo. Iphelele ngama-jeans ehlobo, iziketi, izikhindi, noma ngisho nokuphonswa ngesudi yokugeza. Iza ngombala opinki noluhlaza okwesibhakabhaka, nayo iyathengiswa.
I-Open Back With Cami Strap Ties Dress, intengo yokuthengisa engu- $ 55 $ 28; e Nezinye Izindaba
Ngamabhande amancane nomhlane ophansi, kuhle kakhulu ingubo yokuthengisa ehlobo ephelele. Yigqoke ngamaslayidi ayizicaba, amateki amhlophe, noma izithende. Woza, phonsa i-turtleneck emnyama ngaphansi.
Isembatho esifekethisiwe seFit-and-Flare, $ 175 intengo yokuthengisa $ 123; e Nezinye Izindaba
Gqoka le ngubo ye-chic-equkethe okufekethisiwe kovemvane, imikhono ekhukhumezayo, umgexo we-v-cut, noziphu ongemuva ofihliwe — noma yikuphi kuleli hlobo, kusuka ehhovisi kuze kube sebusuku.
ama-jean omlenze oqonde kahle kakhulu we-curvy
I-Knotted Suede Slip Ons, intengo yokuthengisa engu- $ 95 $ 48; e Nezinye Izindaba
Ungalali kulawa mafulethi asesitayeleni, okwamanje athengiswe cishe ngama-50%. Zitholakala futhi ngombala omnyama.
Floral Tie Blouse, intengo yokuthengisa engu- $ 65 $ 46; Nezinye Izindaba
Bopha blouses yonke indawo kuleli hlobo, futhi ubukeke umuhle ngezikhindi ezifanayo ( ibuye ithengiswe kwa & Ezinye Izindaba ), ngesiketi se-denim, noma nge-jean ephakanyiswe phezulu.
Ingubo yamabhuzu aphakama ethangeni
I-Balloon Sleeve Dress, intengo yokuthengisa engu- $ 95 $ 67; e Nezinye Izindaba
I-100% ukotini kanye ne-100% esezingeni lomkhuba ngenxa yemikhono yayo ekhukhumele. Gqoka ngamaslayidi noma amateki, bese ufaka amabhuzu emaqakaleni awe.
I-Striped Scoop Back Swimsuit, $ 55 intengo yokuthengisa $ 33; e Nezinye Izindaba
Bamba le ngcezu eyodwa ekhanyayo ngenkathi isendalini, bese uyigqoka lonke ihlobo. Ithiphu yepro: Ungayigqoka futhi kuvaliwe e bhishi. Nakhu ukuthi kanjani.
Ingubo yokugoqa iBelted, intengo yokuthengisa engu- $ 125 $ 88; e Nezinye Izindaba
Ingubo enhle kakhulu yomshado nezivakashi zasehlobo, futhi iyathengiswa. Futhi isebenza ngezimpelasonto!
I-Lace Culotte Jumpsuit, intengo yokuthengisa engu- $ 175 $ 123; e Nezinye Izindaba
Yini okufingqiwe kakhulu kune-jumpsuit emhlophe? Yigqoke manje ngezimbadada noma amateki, noma uyihambise ukuze iwe nge-blazer noma ngejakhethi ye-denim
Ihembe Elikotshwe Likakotini, intengo yokuthengisa engu- $ 85 $ 43; e Nezinye Izindaba
Faka lelihembe likakotini elihlwabusayo — elicishe licishe lifike kusentengiselweni — liye kumajini, amabhulukwe anqunyiwe, iziketi, namahembe manje nakulo lonke ikwindla.
Ukugqoka Kwezimbali, $ 95 $ 67; e Nezinye Izindaba
Enye ingubo enhle yomcimbi wasehlobo, noma ukugqoka eholidini, ukusebenza, noma i-brunch. Yibhangqe ngamaslayidi esithende esivimbayo ukuze ubukeke njengamanje.
I-Midi Skirt enombala, intengo yokuthengisa engu- $ 85 $ 43; e Nezinye Izindaba
Olunye ucezu lwesikhashana, lesi siketi esithengiswayo sizobukeka siphelele njengamanje ngesikibha noma ithangi phezulu, noma ngejezi ethokomele, ijakhethi yesikhumba namabhuzu uma kuphela isizini.
AmaJew Edge Jeans, intengo yokuthengisa engu- $ 85 $ 60; e Nezinye Izindaba
Kungani uzisika ijini uma ungazithenga ngaleyo ndlela? Uma ungakahloli i-denim nezinye izindaba, zenzele umusa ungene kukho: Kuhle impela.
isikhumba sekhanda sibuhlungu lapho uhambisa izinwele
Peek-a-Boo Bra, intengo yokuthengisa engu- $ 39 $ 27; e Nezinye Izindaba
Ubhodisi ophelele kunoma ngubani ofuna ukukhishwa okulula nomumo omncane - akukho okungaphezulu. Isayithi linamanye amabra amaningi isendalini manje , futhi.
I-Lace Midi Dress, intengo yokuthengisa engu- $ 175 $ 123; e Nezinye Izindaba
Okunye ukuwina okuthengiswayo, le ngubo ye-lace midi ingagqokwa ngokuphelele unyaka wonke. Vele ushintshe izesekeli zakho.
Ama-Super High Slim Jeans, ama- $ 85 amanani entengo ama- $ 60; e Nezinye Izindaba
Uma ngabe ubusocingweni mayelana nokungena ensimini ye-'omama jean ', kungani ungathathi igxathu manje naleli pair elithengiswa ngamarandi angama-60?
Izimbadada ze-Knotted Heeled, inani lentengo le- $ 125 $ 63; Nezinye Izindaba
Ngoba izimbadada ezinhle ezimnyama — ikakhulukazi ipheya elinesithende esilinganiselwe — kuyimbangela yokuthenga. Futhi ngoba lezi zithandani cishe zizohamba uhhafu.
Songa izingubo, $ 85 intengo yokuthengisa $ 60; e Nezinye Izindaba
I-LBD ongeke uzizwe ugqoke ugqoke kakhulu, noma ngabe izosebenza, isikole, noma ngempelasonto. Noma kunjalo, ungayiphakamisa ngobucwebe obukhulu nezithende noma uyigcine ikhululekile ngamateki noma amaslayidi ayizicaba.
ukutholani ngosuku lomama
Amacici e-Oval Ring, inani lentengo le- $ 25 $ 8; e Nezinye Izindaba
Isho nathi: la macici ayindilinga ayindilinga angaba awakho amadola ayisishiyagalombili.
IKhandlela Elinephunga ElikaNankeen, intengo yokuthengisa engu- $ 29 $ 25; e Nezinye Izindaba
Nezinye Izindaba zaziwa ngephunga lazo elihle — insipho, amakha, nokugcoba umzimba — namakhandlela awo awahlukile. Thenga eyodwa, bese uthenge enye ngesipho sokufudumala sendlu.
Slip Dress, $ 55 intengo yokuthengisa $ 39; e Nezinye Izindaba
Isitayela se-button-up sikhona manje, kepha nge $ 39, yigqoke olwandle njengesembozo uma ungekho kuso njengengubo yokuphuma.
imikhonto kaBritney izingoma ezidumile
I-Grommet Crossbody Bag, intengo yokuthengisa engu- $ 125 $ 38; e Nezinye Izindaba
Snag lesi sikhwama sesikhumba esingu-100% ngenkathi usakwazi — kungama- $ 38 kuphela asendalini.
Ihembe elibunjiwe leWide Sleeve, intengo yokuthengisa engu- $ 65 $ 33; e Nezinye Izindaba
Iblawuzi lezimbali elingeyona into eyisisekelo ngenxa yemikhono efoliwe, amahlombe, futhi - kusobala inani lentengo lama- $ 33. Umphumela.
AmaShort Tropical Paperbag Waist Shorts, $ 55 intengo yokuthengisa $ 39; e Nezinye Izindaba
Ngokobuchwepheshe, ihlobo lisanda kuqala, ngakho-ke kungenzeka ukuthi udinga ibhulukwe elisha.
izindleko ezijwayelekile zokubaza okupholile
yiminyaka eyi-10 igebe elikhulu leminyaka
sara bareilles uthando ingoma isosha esihlatshelelwayo